Tips on Hemorrhoids | Health Tips, Healthy Foods
Home Tips Care Tips on Hemorrhoids
Tips on Hemorrhoids
In the past, hemorrhoids were more common in adults,
less walking and more sitting.
solid foods; Eating too much food causes constipation.
Increased consumption of spicy foods and fried foods.
Raw water glass; It is caused by eating disorders such as drinking too much tea and drinking too little cold water.
but now they are more common in young people. Frequent phone use; Sitting atacomputer for long periods; Hemorrhoids are found in young people due to lack of walking and lack of physical activity.
There are two types of hemorrhoids: internal hemorrhoids and external hemorrhoids. Both can cause hemorrhoids. In the Western sense, hemorrhoids have three stages. Hemorrhoids can be caused by: When you have constipation. When the heat is high, the esophagus becomes hot. Itching There isasmall amount of blood in the abdomen. Aboutayear after that, he developed internal hemorrhoids and often bleeds. In the second stage of hemorrhoids, if you apply pressure when you have diarrhea, the hemorrhoids will come out of the esophagus aboutahandful, and after diarrhea, you will be cleansed with water and put back into the esophagus. Hemorrhoids are the third most common type of hemorrhoid that can be caused by diarrhea and bleeding.
Hemorrhoids can be treated in the first in the second case, place by fasting and eatingahealthy diet. Spicy food; Takeawalk every day to get rid of constipation and diarrhea. Eating lots of fruits; The fruit is ripe. banana, It can be cured by correcting the diet of diarrhea such as Mankyi juice. In the second case, hemorrhoids should be treated not only with diet but also withamild laxative twiceaday or twiceaweek. The third stage is hemorrhoids, which are permanent eruptions. It isastage of hemorrhage that requires not only medication but also surgery.
ကုထုံးတွေက အရင်ကထက် ပိုခေတ်မီတယ်။Tips on Hemorrhoids ဆေးထိုးပုံသွင်းခြင်း; အပ်စိုက်ကုထုံးကဲ့သို့သော လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်က ရိုးရာကုထုံးများကို အသုံးပြုမည့်အစား သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) ကို အသုံးပြု၍ ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို တီထွင်ခဲ့သည်။ အရင်ခေတ်ကလို စောင့်စရာမလိုပါဘူး။ အရေပြားဖောက်သလိုမျိုး နာကျင်မှုကို ခံစားရဖို့ မလိုပါဘူး။ ဆေးရုံမှာ ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် မြန်မာပြည်သူများ၏ စိတ်ထဲမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြစ်တွယ်နေသည့် ဆေးရုံကို ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် ခေတ်မမီတော့သော လိပ်ခေါင်းရောဂါကို ပြင်ပလူနာ ဆရာဝန်များက ကုသပေးနေသည်ကို တွေ့ရှိနေရဆဲဖြစ်သည်။ လိပ်ခေါင်းရောဂါကို ဆေးဖြင့် ကုသနိုင်ပါသေးသည်။ မကြာသေးမီက အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးသည် ဆေးအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကြောင့် အစာပြွန်ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးကို ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
လိပ်ခေါင်းရောဂါ အဆင့်မမြင့်ရင် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာက ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆေးသောက်ပြီး အစာအိမ်ကို ဂရုစိုက်ပါ။ Allergic food ဓာတ်မတည့်ခြင်း။ ဂျုံမှုန့်ကိုရှောင်ရင် အတွင်းဆေးနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင် သင့်လိပ်ခေါင်းရောဂါအတွက် တစ်မျိုးကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနည်း။
အထက်ပါဆေးများသည် အစာအိမ်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်၌ ကုလားပဲ ၂ စေ့မှ ၄ စေ့အထိ တိုက်ကျွေးနိုင်သည်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်လျှင် မုရန်ရွက်ကို ဖျော်ရည်ဖြင့် သောက်သင့်သည်။
Bitter salt is very useful in the treatment of hemorrhoids
Burmese Bitter There are two types of English bitters available.
Burmese salt can be bought at pharmacies by the pound.
Epson-salt can be bought at English pharmacies. Bitter salt can be taken at bedtime with2tablespoons of warm water to relieve hemorrhoids.
The cure for hemorrhoids inapractical way is to dissolve 10 kyats of Burmese salt inabasin of water and sit onaglass. Sit for about 20 minutes and the hemorrhoids will return. Doing this for 14 days daily can cure hemorrhoids. This isasafe method.
ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ရေများများသောက်ပါ။ အသီးအနှံများများစားပါ။
အစိုင်အခဲအစားအစာများ (ဆန်စပါး၊ ဖွဲနု) ရှောင်ပါ။ ဆန်ကြမ်း ဖွဲနုသည် အူလမ်းကြောင်းအတွက် ကောင်းမွန်သည်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဝမ်းလျှောခြင်း။
အလုပ်ရှုပ်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ထိုင်ရမယ်ဆိုရင် ထပြီး ၂ နာရီခြားတိုင်း လမ်းလျှောက်ပါ။
မနက်စောစောထတာ၊ ရေများများသောက်တာ၊ လမ်းလျှောက်တာက ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောနဲ့ ဗိုက်အောင့်တာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဟင်းချက်တဲ့အခါ ရေမပြုတ်ဘဲ ရှေးမြန်မာ့နည်းအတိုင်း ထမင်းကို ပြုတ်ပါ။ ရေအေးက ဆန်ကို အဆီပိုဖြစ်စေပြီး ဝမ်းချုပ်စေပါတယ်။ ဗိုက်ကို ဖောင်းစေတယ်။ ဆန်ပြုတ်က ကောင်းပြီး သကြားနည်းပါတယ်။ အစာကြေလွယ်သည်။ လိပ်ခေါင်းကို အစာအိမ် မညှစ်ဘဲ အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ငရုတ်ကောင်းပူလွန်းရင် အူမကြီးနဲ့ အစာပြွန်တွေမှာ ဝမ်းပျက်နိုင်ပါတယ်။ အတွင်းလိပ်ခေါင်း; ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ငရုတ်သီးခြောက်ကို ရှောင်ပြီး သဘာဝ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုသာ စားပါ။
မနက်စာစားပြီး လှေစီးပြီး ငှက်ပျောသီး ငှက်ပျောသီး မှည့်ခေါ်တဲ့ နာနတ်သီးမှည့်ကို စားပါ။ ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် လိပ်ခေါင်းရောဂါများကို ကာကွယ်ရန် ညစာစားပြီးနောက် ငှက်ပျောသီးစိမ်း တစ်လုံး သို့မဟုတ် နှစ်လုံးစားပါ။
လိပ်ခေါင်းရှိသူများသည် ပျို့အန်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းနှင့် ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ကို ခံစားရနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်အားကာကွယ်ပေးသော ပြင်းထန်သောဝမ်းနုတ်ဆေးများကို သင်သောက်နိုင်သော်လည်း ၎င်းကိုနေ့စဉ်မသောက်သင့်ပါ။ အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ သဘာဝဝမ်းနုတ်ဆေးဖြစ်တဲ့ မန်ကျည်းသီးဖျော်ရည်ကို ပုံမှန်သောက်ဖို့ လိုအပ်ရင် ဆားအနည်းငယ်ထည့်ကာ သောက်လိုက်ပါ။
ပဲပင်သည် လူသားများအတွက် ကောင်းမွန်သော်လည်း လိပ်ခေါင်းရောဂါရှိသူများအတွက်တော့ မဟုတ်ပါ။ ကုလားပဲသည် သန်မာသော်လည်း ဝမ်းချုပ်စေနိုင်သည်။ ဝမ်းနည်းစေတယ်။ တခါတရံ ဝမ်းလျှောခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ လိပ်ခေါင်းရောဂါသည် လိပ်ခေါင်းရောဂါ၏ အဖြစ်များသော အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ ပဲအမျိုးမျိုး ပဲမျိုးစုံစားလို့ရပါတယ်။
နွားနို့သည် လိပ်ခေါင်းရောဂါရှိသူများအတွက် ကောင်းမွန်သည်။ ဆားအစိမ်းဖြင့် ထုတ်ယူ၍ နံနက်စာမစားမီ နွားနို့စစ်စစ် ၂၅ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် လိပ်ခေါင်းရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
Previous articleDoes meditation contribute to physical health?
Next article5 fragrant herbs and plants that repel flies
How can you improve your english? | 8 Ways to Quickly...
These are the most important factors for long and healthy life
How to stay productive every day
3 easy exercises to getaflat belly at home
What makesapersonalight or heavy sleeper?
7 types of gifts that increase good fortune
13 Health Tips You Can Look At In Your Body
Benefits ofavery popular 36-hour fastaday
Why do hot flashes get worse at night? How to stop...